Kukura Kwekukura KweHormone muBangkok - HGH Therapy muThailand
Kukura kwehomoni kunopesana nekukwegura kusati kwasvika. Migumisiro yekurapa kwechiremba muThailand.
Muna 1999, National Institute in Tairendi pakukwegura kwakabudisa chimwe chezvidzidzo zvake zvakakosha zvinoenderana nekubudirira kweshanduko yekurapa nekushandiswa kwevanhu kukura hormone (HGH). Chinangwa chechidzidzo ichi chaiva chinangwa uye kwete kungoedza kusimbisa kushanda kwehutachiona hweHHM, asi kuitisa kuongorora kwakanaka kunogona kuwedzera ruzivo rwezvechiremba runobatanidza nekugona kushandiswa kweHGH mukurwisana nekukwegura. Vadzidzi vadzidza vakagoverwa kuva mapoka maviri. Bhuku rekuedza rakagamuchira majekiseni eHGH, asi boka rekutonga rakagamuchira majekiseni e placebo.
A double-blind blind study HGH
Kudzidza kwezvisikwa kwaiva nemapofu-mapofu, kureva kana vanachiremba kana varwere vaiziva avo vakagamuchira majojo eHGH, asi vakatsvaga placebo. Ichi chidzidzo chaivawo chiitiko chenyika chinosanganisira makiriniki anobva kuThailand. Vakabatanidzwa mumatambudziko, vose varwere uye vamwe vane zviratidzo zvekushaikwa kwevanhu kukura kwehomoni. Boka rezvinhu zvekudzidza zvakakosha muhukuru uye rakakwanisa kupa huwandu hwakanyanya hwekuvimbika nekwanisi yekuona kunyange pasi zvakaderera zvekukosha.
Kurwara HGH pamwe chete nedzimwe nzira dzokurapa
Kunyange zvazvo ichi chidzidzo chaive chakazvipira kuchinjwa kurapwa nekushandisa vanhu kukura hormone, kana zvichidiwa, varwere vakagamuchirawo testosterone, progesterone uye estrogen. Chinangwa chechidzidzo ichi chakanga chisingarevi kuratidza kuti zvingave zvakabatsiro zvekuwedzera kwevanhu hormone uye semamwe mahomoni, akadai se testosterone, progesterone uye estrogen. Yaiva yekukurudzira pamwe chete nekodzero yekurapa yeHGH injections.
Kushandiswa kweHGH kwakataurwa nemurwere
Dr. Thierry Hertoghe, akabudisa chirongwa chechipatara umo kushandiswa kwehutachiona hweHGH hormone kwakapiwa kuvarwere vanotambura nokushayikwa kwevanhu kukura hormone. Ava varwere vaiva nezera rakakura kwazvo. Murwere mudiki ndiye aiva nemakore 27 uye mutana wekare 82. Pakutanga kwekudzidza, Dr. Hertoghe nevamwe vake vakanyatsoburitsa mamiriro ezvinhu evarwere vose.
Mushure mokunge vakanyora nezvehutano hwevarwere vavo, vakagadzirisa jekiseni hormone HGH mumwedzi miviri. Dr. Hertoghe akawanikwa nevarwere vake uye akavakumbira kuti vazadze tsvakurudzo yavakapindura pamusoro pemigumisiro yekurapa vachishandisa bhuku rekuongorora tsanangudzo dzinobatsira zvipi zvavakagamuchira kubva mujinga revanhu kukura hormone. Izvi zvinotevera mapeji emibvunzo yose yebhuku remibvunzo uye chiyero chevarwere vakapindura vachiratidza kuti mamiriro avo akavandudzwa.
Zviratidzo zvehupenyu zveHGH kusimba nekukwegura
The Reduced number of wrinkles on the face - 75,5%
Wrinkles ndeimwe yezviratidzo zvinotaridzika zvekukwegura. Ganda rinotanga kurasikirwa nekusimba kwayo uye kuzara uye yakaumbwa semitsara yemwenje uye yakadzika makwinya. Nhamba yakawanda yevarwere vakabatsirwa nemajekiseni ekuwedzera kwevanhu hormone, vakaratidza kuti HGH yakagadzirisa mitsetse yakaisvonaka kana kuti yakatungamirira kuparara kwemakaka. Injections nehomoni inokura hormone inokwanisa kuchenesa masero eganda uye inovandudza simba rezviso zvepiso, izvo zvose zvinotora basa mukunyangarika kwemakaka.
Ganda rakanyanya pamutsipa uye chiso - 67%
Apo varume nevakadzi vari kukwegura, mishonga inowedzera pasi peganda, zvichikonzera kusunungura kweganda pamusana. Inenge zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevarwere vaHertoghe vanotaura kuti semugumisiro wekugadziriswa kwehutachiona nehutachiona hwekukura kwevanhu zvakaderedza ganda rinoputika pamutsipa uye nechiso. Kuora kweHGH kwakakwanisa kuwedzera hutundu hwemutumbi wemuviri, uyo wakava kubatsirwa kwake.
Mimwe tsvina yakasimba i60.7%
Vanopfuura vatanhatu kubva kune vane gumi vakabatanidzwa mukudzidza kwaDkt Hertoghe, mumwedzi miviri yeHGH injections, mutsipa mutema wakashanduka. Kukura kwehomoni yakakwanisa kuwedzera, kufanana nematauriri temazwi, nekukura kwemisimba kuburikidza nekushandura maitiro ekutenderera kwemisimba uye simba ravo. Kana varwere vane hutano hwakanaka hwekukura kwehomoni, mishonga inowedzera simba uye mafuta mumajeri e insulini-kufanana nekukura kweC1, iyo inoita kuti utano huve hutano hwakanaka, kunyanya pamwe nekubatanidzwa mune zvimwe zvidzidzo zvinobatsira uye kudya.
Nhamba yakaderera yemafuta emuviri - 48%
Inenge hafu yevarwere vakapinda muchidzidzo ichi semugumisiro we HGH injections akashandura muviri mashoma index. Kukura kwehomoni kunotora basa rinokosha mumasabolism, iyo inobata zvikuru maitiro emasumbu uye kuisa mhuka yemuviri mumuviri, asi kunyanya kunenge pakati pepakati chikamu. Chiropa chinoshandura HGH muchiGig-1, uye ine simba rokubvisa mafuta asina kunaka uye kuisa simba rayo!
Ganda rakasimba, rakasimba kune 34.5%
Vanopfuura chikamu chetatu chevanhu vakapindura vakataura kuchinja kukuru kweganda. Ava varwere vakaona kuchinja kwechigadzirwa cheganda. Chigumisiro ndechekushungurudzika kwemisungo uye kuwedzerwa kwema cell hydration, kwete kungoita makwinya uye ganda rinoputika vane tsika yekunyangarika, asi izvi kuchinja kwepanyama zvinobatsirawo kuwedzera kushanduka uye kuwanda kweganda. Masero eganda sezvimwe chero masero mumuviri anoda zvakakwana zvakakodzera hydration function. Masero eganda haana kusiyana. Misiyano ndeyekuti ganda inhengo inoramba ichitaridzirwa kune kunze kwekunetseka, kwakadai sezuva, kutonhora nemhepo. Kukura kwehomoni kunogona kuchengetedza ganda kubva mumamiriro ezvinhu uye kudzivirira kupera mvura, iyo inobatsira ganda kuti rirambe rakasimba, rakasimba uye ridzivise kubva mukukuvara.
Bvudzi rinowedzera - 28,1%
Vanopfuura chikamu chechina chevatori vechikamu munharaunda ino vakaona kuchinja kwebvudzi ravo semugumisiro wekubudiswa kwehomoni yekukura kwehomoni. Kunyangwe ichi chiitiko chakanaka chiri panzvimbo yepamusoro, chikamu chinokosha chevaya vakatora kurapwa kweHGH, tarisa hutete hwakanaka nekuda kwekurapa. Kana masero eganda akadzoka zvakare uye achivandudza, inowedzerawo hutano hwemvere dzemapenzi. Huru follicles inongova nzira yakadzikama yemasero eganda kuitira kuti utano hweganda huvewo hunodikanwa muhutano hwvudzi.
Kuziva uye kugona germanosilicate kushandisa hormone therapy, kukura kwevanhu
A Kuwedzera zvakanyanya muhutano hwepfungwa - 71,4%
Almost-quarter-quarters of the patients experienced an improvement in general state state. Kushaikwa kwehutachiona hwevanhu hurefu kwenguva yakaita kuti kuderedzwa kwehutano hwepfungwa uye migumisiro yechirongwa ichi zvinopa humwe humwe uchapupu hwokuti kukwana kwevanhu kukura kwehomoni kunogona kukanganisa utano hwepfungwa. Kune varwere vakawanda, HGH inokwanisa chete kuita zuva rega rega hupenyu huve huri nyore uye hunofadza. Izvi zvishoma nekuda kwekuchinja muhuno-hunoona hunobva pakuchinja kwemuviri kunoitika mumuviri, asi HGH inokwanisawo kugadzirisa uropi hwemakemikari!
Kuwedzera kwemazinga emagetsi - 86.8%
Pakati pevarwere vanobatanidzwa mukudzidza. Thierry, inenge 9 kunze kwevamwe varwere ve10 vakawana huwandu hwesimba. Vakawanda varwere vanotambura nezvinetso, HGH kushayikwa kunoratidza sekuneta. HGH inokwanisa kukurudzira muviri, zvichikubatsira kuti urambe wakangwarira uye uchitoda kutora zuva. Kukura kwevanhu hormone kunokwanisa izvi nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Chimwe chezvikonzero ndechokuti inowedzera kukwanisa kwemuviri kuwana ruzivo rwekugadziriswa semugumisiro wekurara. Chimwe chikonzero ndechokuti kuora kwemafuta emhuka, semugumisiro weGIG-1, inopa muviri mizinga yakakura yezvigadzirwa pamakemikari.
Kuwedzera kwepanyama mumuviri - 86,04%
Mukuwedzera pakusimudza huwandu hwemagetsi evanhu, hormone inokura yevanhu inokwanisa kuwedzera kukwanisa kwepanyama kushanda kune avo vari kutambura nekushayikwa kwei hormone.
Pamusoro pe85% yevanhu vakapindura mumakiriniki ekuedzwa. Thierry akarondedzera kuti semugumisiro wejojo ​​dzeHGH dzakawedzera kukwanisa kuita maitiro uye basa remuviri. Kukura kwehomhoni yevanhu kunoratidza kuwedzera kwemaitiro emetabolism anopa mishonga kuwedzera simba. Iko kukura kwesimba kunovandudza kukwanisa kwemuviri kukwanisa kuwedzera maitiro ezvokuita mumuviri pamwe nekuwedzera kwekushandiswa kwebasa iri. Uyewo, hormone replacement therapy HGH inowedzera mukana apo muviri unodzoka shure kwekuita muviri uye kukuvara. Kuvandudza Basa rakawedzerwa munguva yekurara zvinoreva kuti Unogona kushanda nesimba uye kakawanda usinganzwi kuneta.
Iwe haugoni kuenda kunorara nguva shoma nemigumisiro yakaipa-82,5%
Kushandura utachiona nehutachiona hwevanhu huri nani hunovandudza kukwanisa kwemuviri kuwana zvakanyanya pahope dzake. HGH inonyanya kuvigwa usiku uye izvi zvinoitika apo muviri unodzoka kubva kuneta uye kupfeka, kuchema kwakawedzerwa masikati. Kune varwere vane urombo hweHGH, muviri hauna kuwana zvizere zvizere zvekurara zvakanaka uye pakupedzisira unotambura nawo. Kunyange zvazvo inonyanya kukosha inofanira kuva nehope usiku kwemaawa masere, varwere vane hutano hweHGH huri nani, kana zvichidiwa, vanogona kushanda zvakanakisisa uye vashoma kurara. Mukuwedzera, varwere vane hutano husinganzwisisi hwekurara, HGH inogona kubatsira kudzorera utano hwakanaka hwekurara, kudzorera zvakasikwa circadian rhythm yemuviri.
Kuwedzerwa kukwanisa kukonzera kushushikana - 83,7%
Kushungurudzika ndechimwe chezvinhu zvinotyisa zvemazuva ano. Kuzvidya mwoyo uye kushungurudzika kunogona kudzivirira zvinhu zvose kubva pakufara kusvika pakuzviziva, kuwedzera njodzi yehutano hwepanyama dzakadai sehutano hwepfungwa, kusuruvara nekurohwa. Iva nezvakawanda kupfuura 4 yevarwere ve5 muchidzidzo ichi mumwedzi miviri kurapwa kweHGH kwakaderedza maitiro ekudzvinyirira. Varwere vane HGH yokushayikwa kwakawedzerwa kuwedzera cortisol uye kunoderedza simba remagetsi, izvo zvinoita kuti vawedzere kunetseka.
Tinokurudzira zvakare kuverenga:
Tanga kutenga ikozvino!